I-Semalt Expert Kwi-Blockage Ye-Spam Referral Spam ku-Google Analytics
Abakwa-Spammers baqhubeka ngokuphuhlisa iintlobo ezintsha zeentshukumo ezihlasela iGoogle Analytics. Okwangoku, kukho ukungena kwe-spam ware evela eRashiya kunye nabagaxekile bathatha ixesha labo ukuphuhlisa i-spams eziza kubutha i-traffic. Kukho iintlobo ezine eziphambili zeepamsithi ezi: i-Analytic, Crawler, i-Legit bots kunye ne-Search spam.
Yehla kwiingxaki eziphosakeleyo ezinikezelwa yingcali ehamba phambili Semalt , uAlexander Peresunko, kwaye uhlale ukhuselekile ekuthunyelweni kogaxekile - web development comany.
Ziyaziwa nangokuthi iindawo zokuthunyelwa kuzo. Nangona bengakhange bavakashele isayithi, babonakala kwi-analytics ngelixa begaxekile i-ID ye-Google Analytics. I-spamming eyenzeka ngendlela engacwangciswanga kwaye ihlose ukukhohlisa umsebenzisi wekhompyutheni ekuvuleni amasayithi abo okuthumela. Zona zivela kwimvelaphi yaseRussia.
Le yimihlobo yeentengiso ezibonakaliswa ngendalo yazo yokuqokelela ulwazi kwi-intanethi. Kucetyiswa ukuba ungabakhenkethi ngenxa yobungozi babo besifo sengqungquthela ngoko kufuneka bavalwe. Umzekelo wamagqabi e-crawler amaqhosha-kwi-website spam.
Nangona i-иts i-legots ayibonakali ngokubanzi kwi-analytics, ngokukhawuleza i-spider igxininise umxholo ngenjongo yokubonisa kwiinjini zokukhangela.
Le spam ayiyi kubuya kwiziko lewebhu kodwa kunokuba ilandele i-akhawunti ye-analytics kwizame zokugawula iithagethi zazo. Ukukhangela ugaxekile kunokucatshungulwa, ukwenzela ukuba ungabonakali kwi-akhawunti ye-analytics.
Amanyathelo okulawula ugaxekile
Nangona i-spams ibonakala idibanisa namawebhusayithi, ama spams aseRussia awanakubandakanya iiwebhusayithi apho zibonwayo. Oku kuluhlu lwezinye iziqhelo eziqhelekileyo zogaxekile ezi:
Uninzi lwezi zixhumanisi azihambeli kwiwebhusayithi yabasebenzisi kodwa kunoko ba tyelele abasebenzisi be-Google Analytics. Iibhanki zabo zibonakalisa kwiziphumo zokuhlalutya ezenza abasebenzisi beGoogle bavakashele iiwebhusayithi zabo. Imizekelo yale spams i-darodar kunye nelovevitality.com. Nangona i-spam ingahambeli isayithi lomsebenzisi, kubalulekile ukubavimba ukuba bangabonakali kwiziphumo ze-Google Analytics. Izizathu zesidingo sokuvimba ugaxekile zi:
i. Kubalulekile ukuba neenkcukacha ezichanekileyo kwinani labantu abavakashela isayithi ukwenzela ukuba uhlalutyo oluchanekileyo lunokwenziwa. Le ngcaciso ibalulekile ekuqaliseni izinga lokunciphisa kunye nobukho bentambo eyenza ukuba idatha iqokelelwe ukuhlalutya ngokuchanekileyo.
ii. Ubuninzi bama spam buchaphazela kakubi i-rankings zeenjini zokukhangela. Ubukho beentengiso eziqhubekayo ngokuphuhliswa kweentlobo zeentlobo zeentambo zifuna ukuba khona kweenkampani ezinjengeMisfit ukulwa nesicatshulwa kunye nokwenza ukuqhuba ibhizinisi elincinci.
Iiprojethi zokudlulisa ziyakwazi ukulwa nokusebenzisa uluhlu lokuhlola: T
1. Isixhobo sokuCoca isiXhobo singasetyenziselwa ukukhusela i-bots ekubeni ibonise kwi-akhawunti ye-Google Analytics ngokuchofoza kwi "View Settings" kunye nokukhetha "ukuhlunga kwebhokisi".
2. Zonke i-URL ye-spam ye-URL kufuneka ifakwe ngokubongeza kwirejista yokungabandakanywa kokudluliselwa kubandakanywa nokukhethwa kwefayile yokujonga.
a) Kwimeko yokuthintela ukuthunyelwa kogaxekile, tyelela i-akhawunti yeGoogle Analytics kwaye ukhethe "Isihlungi" sixhobo.
b) Khetha okukhethwa kukho "Uhlu olutsha" kwaye ufaka igama lesizinda.
c) Ngohlobo lwesicatshulwa, khetha ukhetho olukhethiweyo kwaye ukhethe ukhetho lokudlulisela.
d) Thayipha i-URL echanekileyo enqwenela ukuyivimba kwi "Pattern Pattern".
e) Inkqubo d engentla kufuneka iqhutyelwe kwidibansi enye kodwa kwi-"Ifayile yefayile" kufuneka ukhethe iqhosha lomninimzi.
f) Inqubo efanayo ifaka ukukhangela ugaxekile kuphela ukuba "iNdawo yoHlathi" kufuneka ithathelwe indawo nge "Ixesha leNkampu" kwaye iphethini lizwi elifanelekileyo.
3. Nangona kunjalo kunconywa ukuba ingxelo iyenziwe kwiGoogle ukuba kukho izikhalazo zekhowudi ezinobungozi.